Ungeza kanjani i-cube kaRubik?
Wonke umuntu ofuna ukuthuthukisa amakhono akhe engqondo kufanele axazulule amaphuzu ahlukahlukene. Kuye kwafakazelwa isikhathi eside ukuthi bahlakulela ngokuphelele ukucabanga. Isibonelo, ezifana ne-cube rubik. Mhlawumbe, ngamunye wethu okungenani kanye empilweni yami wayephethe i-cube rubik ezandleni zakhe. Kodwa akuwona wonke umuntu ongabhekana nale puzzle-toy futhi ukuqoqa it. Kulabo abafuna ukuqonda indlela yokwengeza i-cube kaRubik, lesi sihloko sibhaliwe.
Kunezimpendulo eziningana kulo mbuzo: kanjani ukungeza i-cube kaRubik? Namuhla sizokhuluma ngomunye wabo. Okulandelayo, uzonikezwa isinyathelo ngesinyathelo-sinyathelo sokungeza le puzzles.
Esigabeni sokuqala kudingeka sidonsa "isiphambano esiphakeme". Ukwenza lokhu, khetha ubuso esizokwengeza futhi silungise. Kunezimo eziyisihlanu ezihlukile zendawo ye-cube, engowokuqala nobuso obuhlangothini. Ngakho-ke, siqondisa i-cube futhi sikwenza ukuze i-cube yethu ifike ebusweni bokuqala. Okokuqala, ebusweni bokubukeka ubuso, khetha uhlaza okwesibhakabhaka, nomhlophe ophezulu. Khona-ke ngakwesokudla, makabe ngo-orange, ngakwesobunxele - obomvu futhi ngemuva kwesibhakabhaka. Manje faka i-cube yokuqala ebusweni bokuqala. Lona i-cube eluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe. Ngemuva kwalokho, ngendlela efanayo sibonisa i-cube kolunye ubuso ukuze phezulu esiqongweni sithole isiphambano sama cubes amahlanu ombala omhlophe. Sidlula esigabeni sesibili.
Esigabeni sesibili kudingeka sengeze okuthiwa "izingxenyana". Kulesi simo, kubalulekile ukukhombisa i-cube yekona ebusweni bokuqala. Isibonelo, masibe luhlaza okwesibhakabhaka-orange-ezimhlophe ekhoneni elingezansi elingakwesokunxele. Emva kwalokho, udinga ukuhambisa i-cube ekona elingenhla kwesokudla. Manje sithatha ubuso obulandelayo njengohlangothi oluphambili bese siphinda inqubo efanayo. Siyabonga kuye isendlalelo esiphezulu esimhlophe esimhlophe.
Manje yisikhathi sokuqoqa "ibhande". Ukuze wenze lokhu, udinga ukubeka ama-cubes ohlangothini. Esikhathini sethu, kuzoba: okuluhlaza okwesibhakabhaka-orange, obomvu obomvu, u-orange-oluhlaza nokubomvu. Ngemuva kwalokho, vula ingqimba engezansi ukuze i-cube ithathe indawo ehlangothini langaphambili ngezansi. Khumbula ukuthi umbala wobuso bawo ufana nombala we-cube central ebusweni. Manje sibheka, yikuphi ubuso obonakala ngezansi, futhi kuye ngokuthi, sihumusha i-cube ngakwesobunxele noma ngakwesokudla, ngokusho kombala. Uma ama-cubes ayifunayo asesendlaleni esingaphakathi, kodwa angaqondanga kahle, kufanele adluliselwe ngendlela efanayo kuya kwesendlalelo esingaphansi, bese emuva.
Manje senza isiphambano emaphethelweni angaphansi. Sishintsha i-cube ye-Rubik ukuze izendlalelo ezihlangene zibe phansi. Manje sinawo wonke ama-cubes wezingqimba ezingahlanganisiwe ezingekho ezindaweni zazo. Sithatha ama-cubes ebhodini: ophuzi okwesibhakabhaka, ophuzi-orange, ophuzi obomvu nokubomvu.
Emisebenzini elandelayo, kubalulekile ukwenza ukuthi ama-cubes amabili ashintshe izindawo futhi omunye wabo uphendukile. Uma ubuso obuphezulu buphuzi, i-facade iluhlaza okwesibhakabhaka, i-orange isekwesobunxele, bese-ke esimweni "i-cube i-orange-yellow ephezulu (isici siphuzi), futhi phezulu kukhona ophuzi okwesibhakabhaka phezulu (uhlangothi oluhlaza okwesibhakabhaka phezulu), le nqubo izobeka ama-dice amabili endaweni yawo Uma ushukuthela, uzokwehlisa amanye ama-cubes amane, kodwa lokhu akubalulekile ngalesi sigaba, udinga ukuqinisekisa ukuthi wonke ama-cubes amahlanu alungile.
Kulesi sigaba, kufanele uguquke ukuze isiphambano esingaphansi sigcine. Ngesikhathi esifanayo, wonke ama-cubes onboard azophinde afike endaweni.
Sabeka izingxenyana zobuso obuphakathi. Kufanele babe ezindaweni zabo. Ngisho nokuziphatha okungalungile. Yenza izinyathelo ezingamashumi amabili nambili ukubeka kahle ama-cubes ekona. Phinda le nqubo uze ufinyelele umphumela. Uma okungenani i-cube eyodwa isendaweni yayo - vula i-cube kaRubik ukuze ibe ngakwesobunxele ngemuva. Ngemva kwalokho, phinda futhi uhamba ngamashumi amabili nambili.
Siphula ama-cubes wokugcina angabonakali. Kodwa khumbula ukuthi ukujika kuphazamisa zonke izendlalelo, ngakho-ke kufanele uqale ujikeleze uhlangothi olungaphezulu kuphela. Ngemuva kokuthi wonke ama-cubes asele endaweni - vula umkhawulo ophezulu. Yilokho, i-cube kaRubik iyinkimbinkimbi.
Ubusuku beCarnival, iqembu
Yaba yindawo eyaziwayo yeBond entsha
Imincintiswano emihle yoNyaka Omusha kubantu abadala nabantwana
Ukushaywa indiva kanye nokunciphisa umuntu wesimanje
Usuku lomzila wesitimela ngo-2015
Izinkondlo zihalalisela ngoNyaka Omusha: imikhonzo yangempela yoNyaka Omusha 2016
I-Lamoda e-Vkontakte Festival
Luthisa isisindo nobhontshisi: izinzuzo nemithetho yokudla
Inkukhu fillet nge lemon kanye garlic
Ukudla kwamaprotheni kwabesifazane abakhulelwe
Izakhiwo zokudla zamaqanda nezinyama zenkukhu
Karetsa, noma Indlela yokubuyela embhedeni wokulala
Imibala enemfashini, izesekeli zonyaka ka-2010
Amapancake nge shizi lezimbuzi
Kuyini imfashini ukugqoka lo musha wasebusika
Imikhosi yesonto: ukubhapathizwa kwengane
Ureaplasmosis ngesikhathi sokukhulelwa